28 / 01 / 2013 | RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 28, 2013
Rakaabka Mintrooyinka ayaa Mahadceliyay Hummo. Kaftankeyga rakaabka oo ii sheegay inaan taleefanka kula hadlo, ayaa sacabbo lagu qaatey… Waxaan xalay guryaheyga kula aaday metrobus. Telefoonkaygu wuu dhawaaqay. Waxaan raadsaday hooyaday. Sida arday kasta [More ...]
Mayor Mayor Topbas ayaa sheegay in dib-u-dejinta mowjad ee Metrobus ay tahay muhiimad ahaan maalgashiga tareenka
Duqa magaalada Topbas wuxuu sheegay in dayactirka kumeelgaarka ah ee Metrobus uu yahay xalka ugu weyn ee maalgashiga metro ee magaalada Istambul (IMM) Duqa magaalada Kadir Topbas wuxuu carabka ku adkeeyay in metrobus ay tahay mid kumeelgaar ah oo looga gudbo dhibaatada taraafikada. Topbaş, “Dalxiiska ugu weyn waa metro [More ...]
Amarka gaarka ah ee TÜDEMSAŞ?
Amarka Shaqsiyaadka ee TÜDEMSAŞ ma yahay? Kusoo uruurinta xarumaha dowladeed ee Sivas iyo iibinta kama dambaysta ah ee Kangal Thermal Power Plant waxay keentay in indhaha loo rogo TÜDEMSAŞ. Birta iyo birta, Sibidhka, Hilibka iyo Kalluunka, [More ...]
Lahaa Turkey ee Istanbul Gaadiidka Adeegyada Qandaraaska Loomis
Istanbul Gaadiidka Ku Guuleystay Qandaraaska for Turkey Loomis Loomis ee Turkey, in Istanbul taraamka jira, metro, metro iftiin, samaynta howlgalka of khadadka baabuur Tariin iyo cable in Istanbul Gaadiidka Inc. Mishiinnada Iibinta iyo Money [More ...]
TCDD oo ku dhawaaqday saameynta tareenka gaadiidka Minibus ee Malatya
Shirkadda TCDD ayaa warbixin ka bixisay shilalka shilalka xamuulka ee Malatya Sersis Minibus Agaasimaha Guud ee Maamulka Tareenka Gobolka, Gawaarida adeega Malatya ee shilka ayaa ka dhashay shil tareenkii xamuulka ahaa ee ka dhacay isgoyska heerka, Saldhiga Malatya-Direk Station. [More ...]
Beytjiebbap Dhul-gariirka Shidaalka ee Shirkadda
Wadada weyn ee Şırnak-Beytüşşebap ayaa loo xiray gaadiid taas oo ay sababtay roobab mahiigaan ah dartiis. Sida laga soo xigtay macluumaadka la helay, wadada weyn ee Şırnak-Beytüşşebap, shalay fiidkii kadib roob da ’culus ayaa ka dhashay dhul gariir culus oo loo xiray gaadiid. Subax hore [More ...]
Dadka yurubiyanka ah ee u soo socda buuraha
Dalxiis dalxiis ee buuraha ku yaal Gobolka Bariga Anatolia guga ayaa biloowday inay soo jiidato feejignaan dheeri ah dadaalada lagu xallinayo dhibaatada argagaxisada. Dalxiisayaasha ka imanaya Jarmalka, Austria, Faransiiska, Talyaaniga, safar todobaadle ah, 3 kun oo mitir [More ...]
RayHaber 28.01.2013 Warbixinta Shirka
Aqoonsiga Tire Profile Salon Qabashada Gawaarida Tire (TÜVASAŞ)
Gawaarida gaarka loo leeyahay ee Bursa ee Wadooyinka Xalka Dhibaatada Burula between ee udhaxaysa Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka ah halkii ay xafiisyada kulahaayeen waxay la kulmeen Duqa Magaalada caasimada ah ee Recep Altepe natiijada ka soo baxda mid-ka-miis fadhiya miiska ayaa soo galay wadada xalka. [More ...]
Gawaarida yar yar iyo kuwa yar yar ayaa ku dhacay Malatyada: 1 ayaa dhintey, 6 ayaa dhaawacmay Malatya, dadka 1 waa la dilay dadka 6na waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii ay isku dhaceen isku dhacyada adeegga Van ee isgoysyada. Marka loo eego macluumaadka la helay, waxay kuxirantahay xarunta Dilek [More ...]
Dhismaha Xawaaraha Xawaaraha Sare waxay dhibaato ku tahay Kocaeli Wadada loo yaqaan 'YHT road', laga bilaabo Kartepe Acısu [More ...]
Ankara Telefishinka ayaa lagu rakibay nidaamka
Qandaraaska Ankara Ropeway ayaa lagu rakibay nidaamka Nidaamka mashruuca jidadka ee ay Dawladda Hoose ee Magaaladu doonaysay inay ka fuliso caasimada ayaa la joojiyay. Gökçek wuxuu yidhi waxay u noqdeen kansal garaynta khaladaadka ka jira nidaamka qandaraaska oo yidhi, [More ...]
Xafiisyada Basaska ee Shacabka ee Bursa ayaa bilaabay gaadiid lacag la'aan ah
Qolka Gawaarida Gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay ee Bursa ayaa bilaabay gaadiid bilaash ah Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay khilaaf ka dhalisay Qolka gaarka loo leeyahay ee Bursa, shalay Gaadiidka 2-maalinlaha ah ee bilaashka ah ayaa la bilaabay. Dhinacyada ayaa gorgortamaya oo sameynaya soojeedinno labada dhinac ah, xalka [More ...]
Yaa ka soo horjeeda BUDO
Ayaa ka soo horjeedda BUDO. Kumaa u yeedhay Altepe badweynta dhexdeeda oo ka soo horjeedda BUDO? Kadib dalabka qiimaha tigidhada firfircoon sida tikidhada duullimaadka IDO, rakaabka ka socda Bursa sida IDO [More ...]